Archdiocese of Mandalay blog: January 2013
ကမ္ဘာပေါ်၌ ထူးချွန်၍ ရဲစွမ်း သတ္တိရှိသော အမျိုးသမီး(၁၅၀)ကို (News Week) မဂ္ဂဇင်းကြီးမှ ရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးများသည် ခက်ခဲ သော တော်လှန်ရေးကြီးများကို စတင်ရာ၌ ပါဝင် ဦး ဆောင်ခဲ့သူများ ဆင်းရဲသော ကလေးငယ်များအတွက် ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သူများ၊ အမေရိကန် ဒိထွိုက် မြို့ကြီးမှ အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်၊ ကဗူး(လ်) တော်မြို့မှ အမျိုးသမီးများ သာမက မြန်မာပြည် မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ထိပ်ဆုံးမှရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။ မာရီ ကော်လ်ဗင် (Marie Colvin)သည် လည်း ထိုအမျိုး သမီးများထဲမှ တစ်ဦး အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ သူမတို့သည် သူမတို့၏ ရဲရင့်သော အသံကို အချုပ်အနှောင်များ၊ အခက်အခဲများ ကြားမှ ကမ္ဘာသိအောင် စွမ်း ဆောင်နိုင်ခဲ့ သူများ ဖြစ်ကြသည်။
မာရီကော်(လ်)ဗင်သည် လန်ဒန်ဆန်းဒေး တိုင်း(မ်)(စ်) (London Sunday Times Mag.) မဂ္ဂဇင်း၏နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များထဲ၌ သူမ၏ အကြောင်းသည် ပုံပြင်ဆန်ပြီး ထူးချွန်၍ ထင်ရှား၊ သတ္တိ အရှိဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ (Long Island)၌မွေးဖွားခဲ့ပြီး နာမည်ကျော်ယေး(လ်) တက္ကသိုလ်မှ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၀) ခုနှစ်များမှ စတင်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အ ရေးအခင်းကြီးများ၊ ဆန္ဒပြမှု များပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွား ခဲ့ သော (သို့) စစ်ပွဲကြီးများ၊ အထိကရုန်းများ ကြားသို့ သွားရောက်ပြီး စစ်၏ အနိဌါန်ရုံများ ကြားမှာ ထူးခြား သော သတင်းများကို ရအောင် ယူခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ မြေမြှုပ်ဗုံး များထောင်ထားသော လူသတ်ကွင်း (Killing Fields)များသို့ စစ် ထရပ်ကားကြီးများ၏ နောက်ခန်းပေါ်မှာ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ ခါးနာရောဂါပင် စွဲကပ် ခံရအောင် ခရီးကြမ်းများကို လိုက်လံပြီး သတင်းယူ ခဲ့သူဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ် ငယ်စဉ်အခါ ကချောမော သော မျက်လုံးစိမ်းလေးများနှင့် နွေးထွေးသော အပြုံး ပိုင်ရှင် မလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဖြတ်ထိုး ဉာဏ်ထက် မြက်သောကြောင့် နိုင်ငံများကို တစ်ပါတီ အာဏာရှင် စနစ်များဖြင့် အုပ်စိုးနေသော အာဏာရှင်ကြီးများ သာ မက၊ အကြမ်းဖက် သမားကြီးများ (Terrorists) များ၏ ရင်ထဲမှ လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်များကို ထုတ်ဖော် ရယူနိုင်စွမ်း ရှိသူဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ထိ (London Sunday Times Mag.) လန်ဒန်ဆန်းဒေး တိုင်း(မ်)(စ်)၏ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ ထဲ၌ သူမလောက် စွမ်းဆောင်နိုင်သူ မရှိသေးပေ။
(၂၀၀၁) ခုနှစ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တမီးသူပုန်များနှင့် အစိုးရတပ်များ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တိုက်ခိုက် နေသော စစ်မြေပြင် တစ်နေရာ၌ သတင်းများယူနေ သော သူမ၏ မျက်လုံး တစ်ဖက်ကို ကျည်ဆံခွံ တစ်ခု စိုက်ဝင်ခဲ့သောကြောင့် မျက်လုံးတစ်ဖက် ကွယ်သွားခဲ့ရသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်မှာ သူမ တစ်သက်တာမှာ အလွန် တုန်လှုပ်ခဲ့ရသော အချိန်ကာလ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က (၄၅)နှစ် အရွယ်သာ ရှိသေးသည်။ သို့ သော် ချို့ယွင်းသွားသော မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို မျက်လုံးကာ (Patch) တစ်ခု တပ်ဆင်၍ ရှေ့တန်းများသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ခါ ထုံးစံအတိုင်း သတင်းများ ရအောင်ယူခဲ့သည်။ ကွယ်သွားသော မျက်လုံး တစ်ဖက်မှ မျက်လုံးကာကို စိတ်ဓါတ် ကျစရာအဖြစ် မခံယူဘဲ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တံဆိပ် အမှတ်အသား (Badge of Honor) အဖြစ် သေဆုံးသည် အထိ တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း၌ အာရပ်နွေဦးတော်လှန် ရေးများ စတင်ဖြစ်ပွား လာသော အခါ၊ အီဂျစ်ပြည်မှာ လည်း ပြင်းထန်သောတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အီဂျစ် သမ္မတ မူဘာရတ်မှ ဆန္ဒပြပြည်သူများကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က မာရီကော် (လ်)ဗင်သည်လည်း အီဂျစ် တိုင်ယာ ရင်ပြင်ကြီး၌ ဆန္ဒပြသူများ ကြား၌ သူမရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ သူမ၏ ဆန်းဒေးတိုင်း(မ်)(စ်) မဂ္ဂဇင်းကြီး ဆီသို့လည်း ထူး ခြားသော သတင်းများကို တောက်လျှောက် ပို့ပေးနေခဲ့သည်။ ထို အတောအတွင်း လစ်ဗျားနိုင်ငံ၏ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ (Mistrata) မစ္စထရာတာမြို့သို့ သွားရောက် သတင်းယူ ခဲ့သေးသည်။
လွန်ခဲ့သည့် (၅)လခန့်က ဆီးရီးယား (Syria) နိုင်ငံမှ (Homs) ဟုမ်း(စ်)မြို့ကို အစိုးရတပ်များမှ သူပုန် များကို လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်ပြီး မြို့ကို သိမ်းပိုက်ရန် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူပုန်များ ပုန်း အောင်းနေသော ရပ်ကွက်များကို လက်နက်ကြီးများ နှင့် ပစ်ခတ်သောကြောင့် အရပ်သူ အရပ်သားမြောက်များစွာသေကြေ ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှာ ထိုမြို့ထဲ၌ မာရီ သတင်းယူရန် ရှိနေခဲ့သည်။ သူမ၏ ဒုက္ခများကြားမှ ကြံ့ခိုင်သော စိတ်ဓါတ်က ထိုမြို့မှ ထွက်ခွာ မသွားရန် တားဆီး ထားခဲ့သည်။ သူမ၏ လန်ဒန်ဆန်းဒေးတိုင်း(မ်) သ တင်း ဂျာနယ်မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို “သူမသည် လက်နက်ကြီးများထဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်လျှင် အရေးကြီး သတင်းဖြစ်သွားနိုင်သည်” ဟု သူမ၏ အင်တာနက် ဖေ့စ်ဘုတ် (Facebook)ပေါ်၌ တင်ထားခဲ့သည်။ သူမ၏ သူငယ်ချင်းများသည် ထိုစာလေး ကိုနောက်ဆုံး ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ များမကြာမှီ မာရီကော(လ်)ဗင် တည်းခိုနေသော အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံး ဗုံးကြဲ ချခြင်း ခံခဲ့ရရှာသည်။ ထို အဆောက်အဦး တစ်ခုထဲ၌ တည်းခိုနေသူ အားလုံးလည်း တစ်ယောက် မကျန်သေဆုံး ခဲ့ကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပါအ၀င် သူမကို ချစ်ခင် လေးစားသူများကို သူမက လွမ်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို ချန်ထား ရစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ အချိန်မှီပေးပို့သော သတင်းဦးများ ကြောင့် ရှောင်တိမ်း လွှတ်မြောက် ခဲ့ရသော တော်လှန်ရေးသမားများသည်လည်း သူမကို ဘယ်တော့ မှမေ့နိုင် တော့မည် မဟုတ်ပါ။ မည်သူမဆို ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှ စပြီး မွေးရာပါ ဗီဇသတ္တိများကောင်းသောစိတ်များ ပါလာကြ ပါသည်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်၊ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်း ထားကြရခြင်းဖြစ် သည်။
တကယ်တန်း အရေးကြုံလာသော အခါ လူငယ်များ၏ သတ္တိများနိုးကြွလာပြီး အမျိုးမျိုးသော အန္တရာယ် များကြားမှ ထွက်ပေါ်ခါ အသုံးချ တတ်လာကြသည်ကို နိုင်ငံတိုင်း ၌တွေ့မြင်နေကြရပြီဖြစ်သည်။ မာရီကော်(လ်) ဗင် (Marie Colvin)သည်လည်း ဤသို့ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
လူငယ် လူရွယ်များ လူတော် လူကောင်းများဖြစ်ကြစေဘို့ ဆုတောင်းပေးလျက်ယေဇူးသခင်၏မေတ္တာရိပ်မှ
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:50 PM
လူငယ်တို့၏ ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသက်တာတွင် တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို အားကိုး အတုယူပြီး ကိုးစား တတ်သော သဘောရှိကြသည်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ စာပေ အနုပညာရှင်၊ အားကစားသမား စသည့် နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များကို လူငယ်တို့သည် အားကျ အတုယူ ကြသည်။ မိမိ အားကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အသွားအလာ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု များကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး လူငယ်များ အနေဖြင့် စိတ်ဝင်တစား အတုယူ ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူငယ်များ အနေ ဖြင့် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သော နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပုံစံများကိုလေ့လာ အတုယူကြခြင်း သည်ကောင်းပါသည်။ သို့သော် မိမိ အတုယူသည့် နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အချို့ အမူအကျင့်၊ အနေအထိုင်များသည် အသေးအဖွဲ ကိစ္စကလေးပဲဖြစ်သော်ငြားလည်း လူငယ်များ အတု ယူလျှင် ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မှားယွင်းနိုင်သော အကြောင်းအရာဖြစ် သွားတတ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိတို့ စိတ်နှလုံးထဲတွင် စိတ်ဝင်စားသော လူတစ်ယောက်ကို အကြွင်းမဲ့ ကိုးစား ကြသည်။ ဘယ်ပုံ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲ ရှိရှိ မိမိ စိတ်ဝင်စားသော လူတစ်ယောက်၏ အပြုအမူ၊ အမူ အကျင့် တစ်ခုခုကို လိုက်လုပ်ကြသည်။ အကြွင်းမဲ့ လုပ်ဆောင် တတ်ကြသည်။ အကောင်း အဆိုးပြည့်နှက် ယှဉ်တွဲတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတုယူခြင်းဟာ မမှားသွားဖို့ အတွက် အလွန် အရေးကြီး လှပါတယ်။ ကိုယ့်ဉာဏ် အားဖြင့်ကောင်းပြီဟု ထင်ရ သော အရာများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သွား တတ်သည်။ မိမိ၏ စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ဤသူသည်ကောင်း သည်၊ ဤသူသည် ဆိုးသည်ဟု စိတ် ဆုံးဖြတ်၍ မရပါ။ ဒါ ကြောင့် မှားယွင်းတဲ့ အတုယူမှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု မဖြစ်ရလေ အောင် အရာရာကို အုပ်စိုး ပိုင်သတော်မူသော ဘုရားရှင်၌ အားကိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘုရားတစ်ဆူတည်း သာလျှင် ဤသူသည်ကောင်းသည်၊ ဤသူသည်ဆိုး သည်ကို သိနိုင်သည်။ လူ့စိတ်အားဖြင့် စိတ် မဆုံးဖြတ် နိုင်ပါ။
အရာအားလုံးကို သိကျွမ်းနိုင်သော ဘုရားတစ်ဆူတည်းသာလျှင် သိနိုင်သည်။ မိမိတို့ သွားလာ လုပ်ကိုင် ပြုမူသော ကိစ္စအ၀၀တွင်လည်း အားကိုးဖို့ အ ကြောင်း အရင်းသည် ဘုရားတစ်ဆူတည်းသာ ဖြစ်သင့် ပါသည်။ ခရီးတစ်ခုကို သွားရင် ဘယ်နှစ်နာရီ ရောက်မည်ကို ကျွန်တော်တို့ဟာ ခန့်မှန်းပြောဆို တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့နေရာကို ပိုင်ဆိုင်တာက ကျွန်တော်တို့ လူသားများ မဟုတ်ပါ။ အချိန်နာရီကို ပိုင်ဆိုင်သူ ကတော့ ဘုရား တစ်ဆူသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်သွားလေရာရာမှာ ဘုရားကို မျက်မှောက်ပြု တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တွေအပေါ်မှာ မိမိတို့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေမှာ မျက်မှောက် မပြုသင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေမှာ မျက် မှောက်ပြုခြင်း အရာက တစ်ခါတစ်ရံမှာ လုပ်ဆောင် ခြင်း မှန်ကန်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းအရာ မညီညွတ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ မှားယွင်း သွားတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ် ဆောင် ချက်တိုင်းတော်တော် များများဟာ မိမိတို့့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံများ အပေါ် မူတည်ပြီး လုပ် ဆောင်တတ် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ အားကိုး၊ ကိုးစားသည့် အရင်းအမြစ်ဟာ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။ မိမိတို့ အတုယူသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း မိမိ ဘ၀အတွက် အကောင်းဘက်သို့ ဦးဆောင် လမ်းပြနိုင် သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန် လိုအပ် လှပါတယ်။ မိမိ အတုယူ သော ပုဂ္ဂိုလ်က အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည် လမ်းပြ ခြင်း မရှိပဲ အဆိုးဘက်သို့ ဦးတည် လမ်းပြလျှင် ကျွန် တော်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပြုမူခြင်း တို့သည်လည်း အဆိုးဘက်သို့သာ ဦးတည် သွားမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ အတုယူသော သူသည် မှားယွင်းသော အကြောင်းဘက်သို့ လမ်းပြ လုပ်ဆောင်လျှင် ကျွန်တော်တို့၏ရှေ့ ဘ၀အသက်တာ လမ်းခရီးသည် မတွေးရဲ စရာအ ကြောင်း အရင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကိုးစားခြင်း အကြောင်းအရင်း အမြစ်သည် အလွန် အ ရေးကြီးသည်။ ထာဝရဘုရား၏ သမ္မာကျမ်းစာ သုတ္တံ ၃း ၅၊ ၆ တွင် “ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလော့ ကိုယ့်ဉာဏ်ကို အမှီ မပြုနှင့်၊ သွားလေရာရာတွင် ထာဝရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုလော့ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်၏ လမ်း ခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူမည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘုရားက သူ့ကို စိတ်နှလုံးအ ကြွင်းမဲ့ ကိုးစားဖို့ရာပြောထား ပါတယ်။
ကိုယ့်ဉာဏ်ကို အမှီ မပြုပါနဲ့တဲ့။ သူ့ကို စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးစားရင် သွားလေ ရာရာမှာ ဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုရင် ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဘ၀ အသက်တာ လမ်းခရီးကို ပဲ့ပြင်ပေးမယ်လို့ ရေးသား တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 4:07 PM
အပြစ်နွံထဲ နစ်ပြီ ဆိုကာမှ
သြော် . . . သူ့ခမျာ ကယ်သူမဲ့ ရှာလို့ပေါ့။
စွမ်းအားတွေသုံး ဗြုန်းကနဲ လွတ်စေ
တစ်ချက်ကလေး အမိန့်ခြွေလိုက်နိုင်သော်လည်း . . .
တစ်လောကလုံးကို လုံးလုံးကယ်ချွတ်နိုင်သော်လည်း . . .
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 3:59 PM
ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတဲ့ သူတွေက၊ ဘယ်လိုပဲ လှူလှူ၊ ဘယ်လိုပဲ ဆုတောင်း ဆုတောင်း ကုသိုလ်မရဘူး၊ ဆုတောင်းမပြည့်ဘူး ဆိုတာ တကယ် မှန်ပါသလား။
ဒီတစ်ပါတ်မှာ မေးလာတဲ့မေးခွန်းကတော့ “တစ်ချို့ကပြောကြတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတဲ့ သူတွေက၊ ဘယ်လိုပဲ လှူလှူ၊ ဘယ်လိုပဲ ဆုတောင်း ဆုတောင်း ကုသိုလ်မရဘူး၊ ဆုတောင်းမပြည့်ဘူး ဆိုတာ တကယ် မှန်ပါသလား။ အဲ့ဒီ ကိုယ်ကျင့်တရား မ ကောင်းတဲ့သူတွေကို ဘုရားသခင်က တကယ်ကို ပစ်ထားပြီလား။ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတာကလည်း အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုပဲဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ နောင်တ ရပြီးပြောင်းလဲနိုင် ပါတယ်။ မကောင်းခဲ့တာတွေဟာ အမြဲ မပျောက်တော့ဘူးလား။ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ရခြင်းကလည်း တစ်ခုခုကို မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ - မိသားစုပြေလည်ရေး အတွက် တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်စီက အကူအညီ ယူထားရတယ်။ ကူညီတဲ့သူက မိမိရဲ့ ကူညီရခြင်းအပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေးယူနေတာကို ရှောင်ရှားဖို့ မတတ်သာဖြစ်တာမျိုး လည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ နောက် ဥပမာတစ်ခုကတော့ ဓါးပြတစ်ဦးဟာ သူတကာ အများရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသာ ယူပြီး မိမိရဲ့ မိသားစုအ ပေါ်မှာတော့ ကြင်နာ သနားတတ်တယ်။ မိမိရဲ့ လက် အောက် ငယ်သားများ အပေါ်မှာ မျှတတဲ့စိတ် ရှိတယ် ဆိုရင် သူ့ကို ဘုရားသခင်က ကောင်းချီးပေးပါသလား” တဲ့။
ဒီမေးခွန်းကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် အခန်းကြီး ၈၊ အငယ် ၁ မှ ၁၁ ထဲက အဖြစ်အပျက် ကျမ်းပိုဒ်ကို သတိရ တရားရှုမိပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်ကတော့ မနက်စောစော ကိုယ်တော်ရှင်ဟာ ဗိမ္မာန်တော်သို့ကြွတော်မူလျှက် လူအပေါင်းတို့ကို တရားပေးနေစဉ်မှာပဲ ကျမ်းတတ် ဆရာများ၊ ဖာရီရှဲများဟာ ပြည့်တန်ဆာအမှု ကျူးလွန်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖမ်းခေါ်လာခဲ့ပြီး ကိုယ်တော်ရှင်ရှေ့မှာ ထားပြီးတော့ “ဒီလို မှားယွင်းခြင်း အမှုပြုတဲ့ အမျိုးသမီးကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပစ်သတ်ရမယ်လို့ မိုးဇယ်ရဲ့ တရားကျမ်းက စီရင် ထုံးဖွဲ့ထားပါတယ်။ ကိုယ်တော်ကကော ဘယ်လို မိန့်ကြားမလဲဆိုပြီး ကိုယ်တော့်ကို စကားထောင် ချောက် ဖမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်ရှင်က ဘာမျှ ပြန်ဖြေကြားတော် မမူဘဲ အောက်ငုံ့ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာ လက်ညှိုးနဲ့ စာရေးခြစ်နေစဉ် အထပ်ထပ်ငေါ့ပြီးမေးဖန်များတော့ ကိုယ်တော်ရှင်က “သင်တို့တွင် အပြစ် ကင်းသောသူသည် ရှေးဦးစွာကျောက်ခဲနှင့် ပစ်စေလို့ မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ယောက်ပြီး တစ် ယောက် ကိုင်ဆောင် လာတဲ့ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများကို နံဘေးဖက် ပစ်ချခဲ့ကြပြီး မခံချိ မခံသာ တစ် ယောက်မျှ မကျန် ထွက်သွား ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်ရှင်က “အချင်း မိန်းမသင့်ကို အပြစ်တင်ကြတဲ့ သူတွေ ဘယ်မှာလဲ ဘယ်သူကမျှ တရား မစီရင် ကြဘူးလား”လို့ မေးတော့ “ဘယ်သူမျှ မစီရင်ပါ သခင်” ဟုလျှောက်လေ၏တဲ့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်ရှင်က “ငါသည်လည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်၊ သွားလော့နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ရှင်ဟာ အပြစ်သားတို့ကို ကယ်တင်ဘို့ကြွလာတော်မူတဲ့ အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ (ရှင်မာကု ခရစ်ဝင် ၂း၁၇) “ဖြောင့်မတ်သော သူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါ ငါလာသည် မဟုတ်။ ဆိုးသော သူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါ” ငါလာသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” အပြစ်သားတွေ ချဉ်းကပ်နိုင်ကြဖို့ အာပါတ်ဖြေခြင်း စက္ကရမင်းတူး မင်္ဂလာကို ကိုယ် တော်ရှင် တည်ထောင် ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းကိုပြန်ကြည့်မယ် ဆိုရင် “တစ်ချို့ကပြောကြတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းတဲ့သူတွေက၊ ဘယ်လိုပဲ လှူလှူ၊ ဘယ်လိုပဲ ဆုတောင်း ဆုတောင်း ကုသိုလ်မရဘူး၊ ဆုတောင်း မပြည့်ဘူးဆိုတာ တကယ်မှန်ပါသလား။” တစ်ချို့ကပြောတဲ့ စကားဆိုတော့ သာသနာ တော်ကပေးတဲ့ တရား မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ စကားသံ တွေကို အာရုံစိုက် မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ကျင့် တရားမ ကောင်းတဲ့ အဖြစ် အခြေအနေမှ ကြိုးစား ရုံးထွက်ပါ။ ဒီလို ရုန်းထွက်တဲ့နေရာမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့စောင်မခြင်း ကျေးဇူးတော်နဲ့ အောင်မြင်စွာ ရုန်းထွက်နိုင်ဘို့ ဘုရားရှင်ဆီမှာ ဆုတောင်းပါ။ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲပါ။ လှူဒါန်းပါ၊ ရှင်သန်ပါ။ မိမိရဲ့ ဆုတောင်းများနဲ့ မိမိရဲ့ အလှူအတန်းများက မိမိရဲ့ ဘ၀ပြုပြင်ရေးမှာ ပံ့ပိုးမှုတွေဖြစ်နေပါ လိမ့်မယ်။ ဧ၀ံဂေလိ ကျမ်းထဲမှာ ကိုယ်တော်ရှင် ကိုယ်တော်တိုင်က အလှူအတန်းပြုဘို့၊ ဆုတောင်းဘို့ ဟောကြား ထားပါတယ်။ ဆုတောင်း မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ တောင်းတဲ့ ဆုဖြူဖြူ မဲမဲကြီး ချက်ခြင်း လက်ငင်း မရတာကို ပြောတာဖြစ်မှာပါ။ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပြုသူတိုင်းကို ဘုရားသခင်သည် လက်ချည်း ဗလာပြန် လွှတ်လေ့ မရှိပါ။ တစ်ခုခုတော့ ရရှိပြီးပြန်ရ စမြဲပါ။ မိမိ မသိလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အပြစ်ရှိ လူသား တွေ ဘုရားရှင်ထံ ဆုတောင်းကြပြီဆိုရင်
(၁) ဘုရားရှင်ဟာ မိမိရဲ့ ရွှေဉာဏ်တော် အတိုင်း အဖြေပေးတော်မူတယ်။ မိမိရဲ့ ဆုတောင်းချက်ဟာ မှားယွင်းနေပါက အဲဒီ ဆုတောင်းချက်ကို ချပေး တော်မမူသော်လည်း ဆုတောင်းသူရဲ့ ဘ၀၌ လိုအပ်ချက် တစ်ခုခုကို မိမိရွှေဉာဏ်တော် အလျှောက် သိမြင် တော်မူသည့် အတိုင်း ပေးသနားတော်မူ ပါတယ်။
(၂) ကိုယ်စီရဲ့ ဆုတောင်းချက်များကို ဘုရားရှင်ဟာ မိမိရဲ့ အနန္တမေတ္တာတော်၌ အဖြေပေးတော် မူတယ်။ မိမိတောင်းတဲ့ ဆုဟာ မိမိအတွက်၊ သူတစ်ပါးအတွက် အန္တရာယ် ရှိနေပါက (သို့မဟုတ်) အချိန်မတန် သေးပါက မိမိရဲ့ မဟာမေတ္တာတော်၌ အချိန်ယူ လျှက် ပြုပြင် ပုံသွင်းပေးခြင်း ကို ပြုတော်မူတယ်။ ဒီလို အချိန်ယူစဉ် ပြုပြင် ပုံသွင်းပေးစဉ် ကာလမှာ အခြားသောဆု ကျေးဇူးတော်များကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ထပ်ဆင့်ပေး သနားတော်မူလေ့ ရှိပါတယ်။
(၃) ကိုယ်စီရဲ့ ဆုတောင်းချက်များကို ဘုရားရှင်ဟာ မိမိရဲ့ မဟာ အလိုတော်မြတ်နဲ့ အညီ အဖြေပေး တော်မူတယ်။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းကြတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်တော်၏ အလိုတော်သည် ပြည့်စုံ ပါစေသော်။ ဘုရား တပည့်တော်၏ အလိုသည် ပြောင်းပါစေသော်လို့ ဆုတောင်း ကြရပါတယ်။ မိမိရဲ့ အလိုဆန္ဒဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလိုတော်မြတ်နဲ့ မကိုက်ညီပါက ဒါမှမဟုတ် အချိန်မတန်သေးပါက ဘုရားရှင်ဟာ ဆုတောင်း သူအပေါ်မှာ အခြားသော လိုအပ်နေတဲ့ ဆုကျေးဇူး တော်ပေးပြီး အချိန်ယူတော်မူလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကာလအတွင်းမှာ မိမိရဲ့ အလိုတော်ရင်းနဲ့ ညီအောင် ပြုပြင် ပုံသွင်းပေးတော် မူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ရဲ့ ထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ် ဆုတောင်း လာသူတိုင်းကို ငြင်းပယ်သည် ဟူ၍ မရှိ။ တောင်းသော ဆုကိုပေးရင်ပေးမယ်၊ အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်ပါက အချိန် ယူမယ်။ တောင်းတဲ့ဆုဟာ အန္တရာယ် ဖြစ်နေပါက မိမိရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ အညီ မဟာမေတ္တာ တော်၌ မိမိရဲ့ အလိုတော်မြတ် အတိုင်း အခြားသော လိုအပ်နေတဲ့ ဆုတစ်ခုခုကို ချပေးတော်မူပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အလိုတော်မြတ်ကို လက်မခံ လိုခြင်းဟာ မိမိရဲ့ အတ္တကြီးမှု၊ မာန်မာနကြီးနေမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ယူခြင်း၊ ပြုပြင် ပုံသွင်းပေးခြင်း ကာလမှာ မိမိ မတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုပဲ ရရှိနေခြင်းကို မိမိက မသိလိုက်၍ ဆုတောင်း မပြည့်ဟု ပြောဆိုနေခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြစ်ရှိ လူသားတွေ ဘုရားရှင်ထံ ဆုတောင်းကြပြီ ဆိုရင် တိကျပြတ်သားတဲ့ အဖြေလေးမျိုးကို တစ်ဆင့်ချင်း အစဉ်အမြဲပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြတ်သားတဲ့ ပထမ အဖြေကတော့ မိမိသည် မှားယွင်းသော အချက်ကို တောင်းဆုပန်နေပါက No! မပေးနိုင်ဘူးလို့ အဖြေပေးတော်မူ ပါတယ်။ ပြတ်သားတဲ့ ဒုတိယအဖြေကတော့ တောင်းဆု ပန်ချက်က မှန်ပါ၏။ ဆုတောင်းနေသူက မှန်ကန်မှု မရှိ၊ အပြစ် ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပဲပြည့်နေသေးတယ် ဆိုရင် Grow! တဲ့။ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ ရင့်ကျက်လာအောင်၊ ထိုက်တန်သူဖြစ်လာအောင် ကြိုးစား ပါတဲ့။ ပြတ်သားတဲ့ တတိယ အဖြေကတော့၊ တောင်းဆု ပန်ချက်ဟာ အချိန်မတန်သေး ပါက Slow! ဖြေးဖြေး၊ မလောနဲ့လို့ တိကျတဲ့ အဖြေကိုပေး ပါတယ်။ ပြတ်သားတဲ့ စတုတ္ထ အဖြေကတော့ တောင်းဆုပန်ချက်လည်း မှန်၊ အချိန်ကလည်း တန်၊ အခြေအနေ အားလုံးကလည်း မှန်ကန်လာပြီဆိုရင် Go!-ပြည့်စေတဲ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်စီ ဆုတောင်းကြတဲ့နေရာမှာ ဇွဲနဲ့၊ အားမလျှော့ပဲ ဆုတောင်းပါ။ မရဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုခု ရရှိ ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်းသူကို ဘုရားသခင်ကပြစ် မထားပါဘူး။ ကိုယ်ကျင့် တရားကောင်းသူ ဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲလာနိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ယူတော်မူခြင်း၊ အချိန်ပေးတော်မူခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးပေ တေနေသူ ဖြစ်ပါစေ၊ သေခါနီးမှာတော့ နောင်တနဲ့ သံဝေဂနဲ့ တရားရပြီး တရားတော်နဲ့ အညီ ဘ၀ နိဂုံးချုပ်ကြတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ မဟာ ဂရုဏာမေတ္တာတော်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့နောင်တ သံဝေဂ၊ ဆုတောင်းမေတ္တာ၊ အလှူအတန်း၊ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ ဆပ်ကပ်မှုလေးတွေ ပေါင်းစည်း သွားခြင်းရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား လိုက်ရပါတယ်။ ဖတ်ရှုရန် (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၈း၉-၁၄)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:15 PM